कतार एयरबाट आएकी एक महिला तुलसीपुरको क्वारेन्टाइनमा, अर्की एकजना भेटिइनन् ! «
कतार एयरबाट आएकी एक महिला तुलसीपुरको क्वारेन्टाइनमा, अर्की एकजना भेटिइनन् !
Published : 26 March, 2020 7:17 am
कोरोना संक्रमित १९ वर्षीया युवतीसँगै कतार एयरवेजको हवाईजहाज चढेर नेपाल आएकाहरुमध्ये एक जना दाङ जिल्लाको भएको खुलेको छ । उनलाई बुधबार नियन्त्रणमा लिएर राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरको क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । उनमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमण भएको जस्तो लक्षण भने देखिएको छैन । ‘उनी पश्चिम दाङकी महिला हुन्,’ दाङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी सुमित खड्काले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामीले पत्ता लगाएर अस्पतालको जिम्मा लगाएका छौं ।’
फ्रान्समा पढ्न गएकी र दोहा हुँदै यही चैत ४ गते नेपाल आएकी १९ वर्षीया युवतीमा कोरोना पोजेटिभ पाइएपछि उनीसँगै कतार एयरवेजको जहाजमा सवार अन्य यात्रुहरुको पनि खोजी सुरु गरिएको थियो । कतार एयरवेजको हवाईजहाज चढेर आएकाहरुको सूचीमा दाङका ओली र पन्त थरका दुई जना महिलाको नाम भेटिएको छ । तर, एक जनालाई भने प्रहरीले पत्ता लगाउन सकेको छैन । प्रहरी कार्यालय दाङका प्रवक्ता डिएसपी खड्काले भने, ‘दुई जना भनिए पनि एक जना पत्ता लागेको छैन । उनी दाङकी होइनन् कि जस्तो छ ।’
रुकुम, रोल्पा र प्युठानमा शंकास्पद बिरामी
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ३ पुगेको छ । तीनैजना विदेशबाट आएकाहरु हुन् । पहिलो संक्रमित चीनबाट आएका व्यक्तिमा देखिए पनि उनी उपचारपछि निको भएर घर फर्किइसकेका छन् । दोस्रो व्यक्ति फ्रान्सबाट आएकी १९ वर्षीया युवती हुन् भने तेस्रो व्यक्ति युएईबाट आएका धादिङका ३२ वर्षे पुरुष हुन् ।
विदेशबाट आएकाहरुमा कोरोना पुष्टि भएपछि गाउँघरमा विदेशबाट आएकाहरुलाई शंकाको दृष्टिले हेर्न थालिएको छ । रुकुम, रोल्पा र प्युठानमा यस्तै भएको छ ।
पश्चिम र पूर्वी रुकुममा कतारबाट आएका दुई जना व्यक्ति कोरोनाको जस्तै लक्षण देखिएको भन्दै अस्पताल भर्ना भएका छन् । तर, उनीहरुको नमूना संकलन हुन सकेको छैन । सुरक्षाका लागि स्वास्थ्यकर्मीले लगाउने विशेष प्रकारको पोशाक पीपीई नभएपछि बिरामीको नमूना संकलन गर्न नसकिएको हो ।
रुकुमका लागि दाङमा पीपीई खोजी हुन थालेपछि बेलझुण्डीस्थित कोरोना विशेष अस्पतालका लागि ल्याइएको केही थान पीपीई बुधबार रुकुम पठाइएको छ ।
नेकपा दाङका इञ्चार्ज जीवन गौतमले प्रदेशसभा सदस्य तेजबहादुर ओलीलाई पीपीई हस्तान्तरण गरेका थिए । ‘दाङमा पीपीई चाहियो भनेपछि मैले आफैं काठमाडौंबाट पीपीई बोकेर ल्याएको थिएँ,’ गौतमले भने, ‘त्यसैमध्येबाट केही थान रुकुम पठाइएको हो ।’
यसैगरी विदेशबाट आएका एक जना व्यक्तिलाई प्युठानको रातामाटामा क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । कोरोनाको जस्तै लक्षण देखिएपछि उपचारका लागि रुपन्देही ल्याइएका प्युठानका एक जना बिरामीको रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको छ ।
रोल्पामा पनि एक जना व्यक्तिलाई उच्च ज्वरो आएपछि दाङको बेलझुण्डीस्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा ल्याउने तयारी गरिएको छ ।
बेलझुण्डीस्थित कोरोना विशेष अस्पताल बुधबारबाटै सन्चालनमा आएको छ । तत्काललाई ३० शय्याको अस्पताललाई पछि १ सय शय्याको बनाउने तयारी रहेको अस्पताल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवम् प्रदेश ५ का कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसी (सोनाम)ले जानकारी दिए ।
चीनमा फेरी आर्को नया रोग (ब्यूबोनिक प्लेग) चीनपछि अमेरिकामा पनि देखियो।
अहिले सम्पूर्ण विश्व कोरोना भाइरस महामारीसँग जुधिरहेको छ।यो अदृश्य भाइरस विरुद्धको
रोकियो अनलाईन कक्षा भोलिदेखि न हुने विद्यालय सञ्चालकहरूको निर्ण।
अनलाईन कक्षा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले साउन १ गतेदेखि देशैभर अनलाइन कक्षा रोक्ने भएको छ। नेशनल
आज एकै दिन ६ सय ९७ जना कोरोना लाइ जितेर आ-आफ्नो घर फर्किए खुसिको सिमा रहेन
नेपालमा निरन्तर कोरोना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्कने क्रम बढीरहेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा
नेपाल मा थप आज ११६ जानमा कोरोना भाईरस (कोभीड १९) को संक्रमण पुस्टि भएको छ। निको हुने को संख्या ६९७
बुधबार नेपालमा ११६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार
चीनमा फेरी आर्को नया रोग (ब्यूबोनिक प्लेग) चीनपछि अमेरिकामा
आज एकै दिन ६ सय ९७ जना कोरोना लाइ
नेपाल मा थप आज ११६ जानमा कोरोना भाईरस (कोभीड